Kanada dia manitatra ny fepetra quarantine COVID-19 sy ny fameperana ny dia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Kanada dia manitatra ny fepetra quarantine COVID-19 sy ny fameperana ny dia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Androany, ny governemanta Canada dia manitatra ny fepetra fitsangatsanganana vonjimaika izay mametra ny fidiran'ny teratany vahiny any Kanada hatramin'ny 21 Jona 2021.
Ny fomba fiasa any Canada momba ny fitantanana ny sisin-tany dia misy ny fetra fidirana sy ny sidina
Ireo mpandeha an'habakabaka izay miainga avy any India na Pakistan mankany Canada, amin'ny alàlan'ny lalana tsy mivantana, dia tsy maintsy mahazo fitsapana mialoha ny fiaingan'ny COVID-19 avy amin'ny firenena fahatelo
Fepetra takiana mialoha ny fahatongavana, ny fahatongavany ary ny fanadinana aorian'ny fahatongavany; fijanonana hotely tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha an'habakabaka; ary karoketra 14 andro tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha
Ny Governemanta Kanada dia naka fomba malina sy tompon'andraikitra eo amin'ny sisintany, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny fandinihana ireo angon-drakitra misy sy porofo ara-tsiansa miaro ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana.
Androany, ny Governemantan'i Kanada dia manitatra ny fepetra fitsangantsanganana vonjimaika izay mametra ny fidirana any Canada hatramin'ny olom-pirenena vahiny hatramin'ny 21 Jona 2021. Mba hitohizan'ny fitantanana ny risika avo lenta amin'ny tranga COVID-19 any Canada, ny governemanta Canada dia nanitatra ny fampandrenesana ho an'ny Airmen (NOTAM) mametra ny mivantana rehetra sidina mpandeha ara-barotra sy tsy miankina any Canada avy any India sy Pakistan hatramin'ny 21 Jona 2021 amin'ny 23:59 EDT. Ny governemanta dia manitatra ihany koa ny takiana amin'ireo mpandeha an'habakabaka izay miainga avy any India na Pakistan mankany Canada, amin'ny alàlan'ny làlana tsy mivantana iray, mba hahazoana fitsapana mialoha ny fiaingan'ny COVID-19 avy amin'ny firenena fahatelo alohan'ny hanohizany ny diany mankany Canada.
Ny fomba fiasa any Canada momba ny fitantanana ny sisin-tany dia misy ny fameperana fidirana sy sidina; fitakiana fanandramana mialoha, fahatongavana ary fanamarinana aorian'ny fahatongavany; fijanonana hotely tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha an'habakabaka; ary karoketra 14 andro tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha. Ny governemanta Canada dia manitatra ireo fepetra ireo ihany koa mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana.
Rehefa mivoatra ny siansa sy ny porofo ary mitombo ny fahalalana ny viriosy sy ny karazany, dia hiova koa ny politika hiarovana ny Kanadiana. Ny angon-drakitra ankehitriny dia mampiseho fa ny fepetra takiana mialoha, fahatongavany ary ny fitiliana aorian'ny fahatongavan'i Canada, ary ny fijanonana hotely tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha an'habakabaka, dia miasa. Ny valin'ny governemanta Canada dia hanohy hanao laharam-pahamehana amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana, sady manome antoka ihany koa ny fikorianan'ny entam-barotra sy ny serivisy ilaina amin'ny toekarena kanadiana.
“Noho ny isan'ny tranga COVID-19 mijanona ho tsy dia misy lanjany loatra any India sy Pakistan, dia nanitatra ny fameperana ny sidina izahay sy ny fepetra takiana amin'ny firenena fahatelo mialoha ny fiaingana. Ireo fepetra mitohy ireo dia napetraka mba hanampiana ny fiarovana ny Kanadiana, ary ny fitantanana ny risika avo lenta amin'ny tranga hafarana COVID-19 sy ireo karazana ahiahy any Canada mandritra ny fotoana mitombo ny tsindry amin'ny rafi-pitsaboana. "
Ilay manan-kaja Omar Alghabra
“Manitatra ny fitsapana sy ny fepetra momba ny quarantine izahay any amin'ny sisintany satria miaro ny Kanadiana izy ireo. Rehefa mifindra miaraka amin'ny onja fahatelo amin'ny areti-mandringana ny rafi-pitsaboana dia hanohy hanitsy ny valinteniny amin'ny COVID-19 ny governemanta. Mamporisika ny Kanadiana rehetra aho hanao vaksiny rehefa tonga ny anjarany ary manara-dalàna hatrany. ”
Ilay manan-kaja Patty Hajdu
“Nandritra ny areti-mandringana, dia nanao hetsika mahery vaika teo amin'ny sisintaninay izahay mba hiarovana ny Kanadiana sady mitazona ny fivezivezin'ny entana ilaina. Hanohy hanao ny laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny kanadianina izahay rehefa mampifanaraka ny fiovan'ny valanaretina. "
Ilay Bill Blair mendri-kaja
Minisitry ny fiarovam-bahoaka sy ny fiomanana vonjy maika
Mba hamahana ireo toe-javatra tsy manam-paharoa manamorona ny sisintanin'i Kanada-Etazonia, ireo mponina any Alaska izay mandalo ao Yukon amin'ny alàlan'ny fiara mankany amin'ny faritra hafa any Alaska, ary ny mponina any Northwest Angle, Minnesota, mandeha fiara mamakivaky an'i Canada mankany amin'ny tanibe Etazonia, dia tsy ho afa-mivoaka - ary ny fitsapana aorian'ny fahatongavana.
Ireo mpitsangatsangana dia tsy maintsy manohy mampiasa ArriveCAN hanome vaovao mifandraika amin'ny COVID, fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny 72 ora alohan'ny nahatongavany tany Canada. Ankoatr'izay, ny mpandeha dia tsy maintsy manolotra ny tantaram-pitetezany mandritra ny 14 andro alohan'ny hidirany any Canada. Ity fampahalalana ity dia hanampy amin'ny famaritana sy fanaraha-maso ireo firenena manana taha ambony amin'ny fanafarana COVID-19 ary ireo karazana ahiahy.
Ny tahan'ny fametrahana vola ho an'ireo tonga amin'ny rivotra (1.7%) sy ny tany (0.3%) dia mbola ambany dia ambany. Ny fepetra dia nahatonga ny 96% latsaka ny fifamoivoizana an'habakabaka ary ny fidinan'ny 90% ny fivezivezena tsy ara-barotra niditra an-tanety tany Canada, raha oharina amin'ny volan'ny pre-pandemie.
Ny mpandeha rehetra miditra ao Kanada dia tsy maintsy manolotra ny mombamomba azy ireo, ao anatin'izany ny antsipirian'ny tantaram-pitetezan'izy ireo 14 andro, amin'ny alàlan'ny fampiasana ArriveCAN amin'ny alàlan'ny elektronika. Ity fampahalalana ity dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny ArriveCAN ao anatin'ny 72 ora alohan'ny fahatongavan'ireo mpandeha any Kanada mba hahazoana antoka fa marina ary hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fanafarana COVID-19.
Ny fanitsakitsahana ny torolàlana momba ny quarantine na ny fitokana-monina omen'ny manamboninahitra mpanadihady na manamboninahitra quarantine rehefa miditra any Canada dia fandikan-dalàna amin'ny lalàna Quarantine ary mety hiteraka sazy mihatra, anisan'izany ny 6 volana an-tranomaizina sy / na $ 750,000 amin'ny onitra.
Ny Governemanta any Canada amin'izao fotoana izao dia mifandray amin'ny mpandeha maherin'ny 5,500 XNUMX isan'andro amin'ny alàlan'ny antso mivantana na antso an-tariby mandeha ho azy, izay manamarina ny fanarahan'izy ireo ny baiko mitokana tsy maintsy atao.
Hatramin'ny 18 Mey 2021, 97% amin'ireo fitsabahan'ny 90,044 nataon'ny mpitandro ny filaminana dia nahatonga ny fanarahan-dalàna nataon'ny mpandeha. Na izany aza, amin'ny tranga vitsy an'isa dia navoaka ny fampitandremana am-bava, ny fampitandremana an-tsoratra, ny tapakila ary ny fiampangana.
Hatramin'ny 20 Mey 2021 dia nahatratra 1,577 ny tapakila voalaza momba ny fifanolanana navoaka noho ny fandikan-dalàna tamin'ny lalàna Quarantine.